Noho ny tahotra sy ny henatra misy dia mbola betsaka amin’ireo vehivavy no tratry ny aretina mamany lava eto Madagasikara. Izy ireo izay tsy sahy manantona ny hopitaly, na dia maimaim-poana aza ny fitsaboana, noho ny fanilikilihan’ny fiarahamonina azy. Ho an’ny eto amintsika dia ireo vehivavy any amin’ny faritra Atsimo Andrefana no maro an'isa voan’ity aretina ity raha ny vaovao voaray. Raha ny fantatra lire la suite...
Noho ny tahotra sy ny henatra misy dia mbola betsaka amin’ireo vehivavy no tratry ny aretina mamany lava eto Madagasikara. Izy ireo izay tsy sahy manantona ny hopitaly, na dia maimaim-poana aza ny fitsaboana, noho ny fanilikilihan’ny fiarahamonina azy. Ho an’ny eto amintsika dia ireo vehivavy any amin’ny faritra Atsimo Andrefana no maro an'isa voan’ity aretina ity raha ny vaovao voaray. Raha ny fantatra More...
Raha tsiahivina dia ny faran’ny volana aprily teo no nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny fiakaran’ny karaman’ny mpiasam-panjakana ho 8 isan-jato ny Filoham-pirenena. Izany dia noho ny fahatsapany fa henjana ny zava-misy eo amin’ny sosialim-bahoaka, satria ny Filoham-pirenana dia voafidy hitondra fihatsaram-piainana ho an’ny vahoaka malagasy 22 tapitrisa sy hanarina ny firenena avy anaty hantsan’ny kr More...
Depiote 73 : Mitady rà latsaka
Dia tena habibiana tsy roa aman-tany raha tena vonona hitarika ireo mpanara-dia azy hanala ireo kofehy mena (manambara fa faritra arovana, ary tsy azo hidiran’iza na iza ireo toerana misy izany) ireo solombavambahoaka 73. Ny sabotsy teo mantsy dia sahin’ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa no nilaza sy nanome toromarika ny mpanara- dia azy ireo teny amin’ny kianjan’ny fifankatiavana Analakely, fa hisy fotoana i More...
Asam-panjakana : Nihaona tamin’ny Filoham-pirenena ireo adiministratera sivily ambony
Manoloana ny olana misy eo anivon’ny minisiteran’ny Asam-panjakana, ny fanavaozana ny fitantanana, ny asa ary ny lalàna sosialy, nisy ny fihaonana teo amin’ny Filoham-pirenena, ny sabotsy lasa teo tamin’ireo mpiasam-panjakana ambony (administrateur civil) avy amin’io minisitera io. Solontena izay nahazo alalana avy amin’ny fianakavimben’ny administratera sivily. Araka ny fantatra avy amin& More...
Raharaha Houcine Arfa : Naverina nohenoina ireo mpandraharahan’ny fonja voarohirohy
Naverina omaly teny amin’ny lapan’ny fitsarana etsy Anosy ny fihainoina ireo mpandraharahan’ny fonja miisa efatra sy ilay mpamily fiara karetsaka voarohirohy tamin’ny fampandosirana ilay teratany vahiny Houcine Arfa. Araka ny voalaza dia noho ny tsy fahatontosan’ny fanadihadiana hatramin’ny farany no antony namerenana izany. Taorian’ny fifandaharana sy ny fitsarana voalohany moa, dia nangataka fahafah More...
Sainte-Marie : Lehilahy iray maty natelin’ny ranomasina
Namoa-doza ny fankalazana ny fetin’ny pantekosta afakomaly. Lehilahy iray manodidina ny 20 taona no fantatra fa maty natelin’ny ranomasina tany Sainte marie nandritry ny fotoam-pitsangatsanganana. Araka ny loharanom-baovao dia fantatra fa ora iray mahery teo mihitsy vao tafakatra an-tanety ny vatana mangatsiakan’ity farany izay natelin’ny ranomasina ny 21 Mey lasa teo, izay ny sampana mpamonjy voina no nanao ny fisavana, a More...
Vavatenina : 5 lahy voarohirohy nangalatra taolam-paty
Mirongatra ny vaky fasana sy ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny faritra Vavatenina. Ahazoam-baovao matetika mantsy tao ho ao fa betsaka ny taolam-paty very noho ny vaky fasana ataon’ireo olon-dratsy. Araka ny loharanom-baovao dia lehilahy miisa dimy no voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny vaky fasana miaro halatra taolam-paty nisesy tao amin’ireo kaomina vokatry ny fiaraha-miasan’ny fokonolona sy ny mpi More...
By lalignedemire 22-May-2018
Mgr Tsarahazana Désiré : Notendren’ny Papa ho Kardinaly
Ny alahady 20 Mey lasa teo, nandritra ny fotoam-bavaka Regina Coeli nataon’ny Papa François tany Roma dia voatendry ho Kardinaly i Mgr Tsarahazana Désiré, Arsevekan’i Toamasina, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara. Teraka tamin’ny 13 jona 1955 tao Besahona Antindra (Sambava), Antsiranana, i Mgr Tsarahazana Désiré ary zanak’i Tsarahazana Rég More...
Berija sy Sambahita : “Mamafy lainga ireo Depioten’ny fanovana”
Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny amin’ny Motel Anosy i Berija sy Sambahita ny sabotsy lasa teo. Nanaovana vela-pandrika izy mba hahafahana misambotra azy fa tsy nahavoa ireo. Nambaran’izy ireo fa fanasoketana fotsiny no natao an’i Berija ao anatin’izao fotoana mafampana eto amin’ny firenena izao. Misy mifofo ny ain’izy ireo, ary nanaovana planina maty paika kanjo tsy tafavoaka izany. Nam More...
By lalignedemire 19-May-2018
Parlemantera mpomba ny fitondrana : Manohana ny Filoha hatramin’ny farany
Tonga nanotrona ireo mpisolovava ny Filoham-pirenena teny amin’ny Hcc ireo parlemantera mandala ny ara-dalàna. Mampita hafatra izy ireo, fa “tokony arahina amin’ny atsipirihany ny Lalàm-panorenana ary tokony arahina ny “principe de separation des pouvoirs” na ny fisaraham-pahefana. Tsy tokony hisy ny tsindritsindry na ny teritery izay atao amin’ny andrim-panjakana manoloana ny didim-pitsarana More...